Isigama: Qinisekisa, Qalisa, kwaye ulungiselele ukukopa nge-AI | Martech Zone
Isigama: Qinisekisa, Qalisa, kwaye ulungiselele ukukopa nge-AI
NgoLwesine, Julayi 16, 2020 NgoLwesihlanu, Julayi 17, 2020 Douglas Karr
Isigama isebenzisa ulwimi oluveliswe yi-AI ukunika ikopi yamandla kwiimveliso zehlabathi kwaye ivelise ulwimi olungazange lubonwe ngexesha langempela, kusetyenziswa ukuveliswa kolwimi lwendalo kunye nokufunda okunzulu.
I-Phrasee yitekhnoloji ye-AI esebenzisa imigca yesifundo sakho se-imeyile njengelebhu yolwimi. Izinto zeelwimi zidibanisa ukufumana imodeli yolwimi eyenzelwe uphawu lwakho. Ke i-AI isebenzisa imodeli yolwimi lwakho olwahlukileyo kuwo onke amaphulo akho okuthengisa- ukusuka kwi-imeyile ukuya kuTyhilizo, ekuhlaleni ukubonisa, ukukhangela okuhlawulelweyo kwiwebhu.
Ngaphambi kwePhrasee, kwafuneka uthembele kwithuku lemvelo lomntu. Kwaye mhlawumbi isebenze kwii-90s. Kodwa ukuthandazela ukuba isisu sakho sikufumane ngokuchanekileyo akusayi kusika kwakhona. Ngokomndilili, i-Phrasee ihambisa ngaphezulu kwama-700,000 okuvula okuvulekileyo kunye nokucofa okungaphezulu kwama-56,000 ngephulo ngalinye.
Isishwankathelo sokuBhala ngokuBhala ngokuPheleleyo kwi-AI
Imeyile ebhalwe ngegama -I-AI-enikwe ikopi yokwenza ukuba ivule ngakumbi, ukucofa kunye nokuguqula. Ukudityaniswa kubandakanya iSalesforce, iMovableInk, Sailthru, Acoustic, kunye neAdobe.
Ibinzana lokutyhala -Usebenzisa i-AI ukuvelisa imiyalezo yokutyhala engcono kunabantu.
Ibinzana loLuntu -Kusebenzisa i-AI ukufumana imiyalezo engcono ye-Facebook kunye ne-Instagram yemikhankaso yentengiso, konke ngokucofa iqhosha.
Ibinzana kuyo yonke indawo -Sebenzisa i-AI ukuphucula ikopi yewebhu, ukubonisa iintengiso, imikhankaso yokukhangela ehlawulelweyo, okanye enye into ephakathi.
I-AI-Inikwe amandla i-imeyile yesihloko sokuSebenzisa iMeko
Ngo-2016, i-eBay yamkela iteknoloji ye-AI kwaye yaqesha Isigama ukunika amandla imigca yesifundo se-imeyile kwaye ucofe izaziso kubabhalisi bayo abangaphezu kwezigidi ezili-101 ze-imeyile kwihlabathi liphela. Ngenxa yoko, i-Phrasee iyitshintshe ngokupheleleyo intengiso ye-eBay kunye nendlela ethetha ngayo nabathengi kwi-Intanethi. I-eBay ibonile:
I-15.8% yereyithi evulekileyo yokuphakama kwenqanaba
I-31.2% yomyinge wokucofa kwinqanaba lokucofa
Ngokwandisa zombini ulwimi kumgca wesifundo kunye ikopi yesihloko ngaphakathi kwe-imeyile, isiphumo sekhompawundi siyothusa Ukuphakama kwe-42.3% kwinqanaba lokucofa.
Bhukisha iDemo yeNkcazo
tags: aiukuvelisa imigca yesifundoLungiselela umyalezo wokutyhalaLungiselela izaziso zokutyhalaukwandisa isicatshulwa sentengiso sentlaloLungiselela imigca yesifundoukhangelo oluhlawulelweyo aiibinzanauvavanyo lwelayini yomxholoikopi yewebhu ai
UOfisi wam waseKhaya ohlaziyiweyo wokurekhodwa kweVidiyo kunye noPodcasting